21 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Magaalada Baghdaad ee dalka Ciraaq – The Voice of Northeastern Kenya
21 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Magaalada Baghdaad ee dalka Ciraaq
Qof naftiis hura ah ayaa lagu soo waramayaa in uu isku qarxiyya meel laga soo galo waqooyiga Magaalada Baghdaad, waxayna warakr sheegayaan in qaraxaas ay ku dhinteen 15 qof halka 32 kalana ay ku dhaawacmeen.
Ciidamada booliska oo xaaqijiyay qaraxanai saaka oo khamiis eheyd dhacay islamarkaana k a dhacay Magaalada Khalis oo 80 u jirto caasimada ayeeysan jirin cid sheegatay Mas’uuliyadiisa.
Laamaha amanaka oo la hadlayay wakaalada wararka ee reutus ayaa sheegay in inbtadan dadka dhintay ay yihiin shacab kujiray gawaaridooda o sugayay saxmad balaaran oo jirtay si ay u galaan Magaalada.
Dadka ku gaariyooday qaraaxasi ismiidanminta ahaa ayaa laga cabsi qabaa in ay sare u sii kacdo sida ay sheegayaan shaqaalaha caafimadka maadama qaar kamid ah dadka dhaawacmey qy qabaan dhaawacyo halis ah.
Tani ayaa ku soo aadeysaa oyadoo kooxda Isugu mgacawday khilaafada Islaamka ee ciraaq iyo Sham ay sheegatay weerarkii Axadii shalay ka dhacay magaalada Baqdaad ee caasimada dalka Ciraaq oo ay ku dhinteen inkabadan 15 qof.
Weerarkan oo ahaa isagan mid ismiidaamin ah ayaa qof bombaano watay isku qarxiyey goob booliiska dadka ku baaraan oo ku taal wadada laga galo xaafada Shiicada degto ee Kadhimiyah.
Dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jiraan ugu yaraan 10 askari oo booliis ah, waxaa la sheegayaa in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof.
Weerarada ismiidaaminta ah ee Daacish la beegsaneyso magaalada Baqdaad ayaa sare u kacay bishii lasoo dhaafay kadib markii kooxdaasi laga saaray magaalada Fallujah ee wadankaasi.
← Dowlada oo Qorsheyneeso in ay qorto Macalimiin Cusub
Nin Siiriyaan ah oo isku qarxiyey Bandhig Faneed oo ka dhacayay dalka Germany →